पुष्पलाल र ‘डन’ तन्त्र
टंक कार्की मंगलवार, कात्तिक २१, २०७४ 1307 पटक पढिएको
पुष्पलाललाई ‘डिथ्रोन’ गर्ने प्रवृत्तिले समाजबाट तिरस्कृत र आपराधिक व्यक्तिलाई बोकेर हिँडिराखेको छ
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको मूल प्रवाह हो । सँगसँगै, यसका सबलता र दुर्बलता दुवैको संयुक्त अभिव्यक्ति पनि हो यो । आन्दोलनभित्र रहेका विचलनको कुरालाई अहिलेका घटना, प्रवृत्ति र पात्र हेरेरमात्र हुँदैन, यसको मुहानमै पुग्नुपर्छ । पुष्पलाललाई पार्टीको महासचिवबाट हटाइएदेखि नै पार्टीमा विचलनको सूत्रपात भएको हो । उनलाई पार्टीको कुनै महाधिवेशनले हटाएको होइन।
जे-जे आरोप लगाएर उनलाई त्यतिखेर हटाइयो, त्यतिखेरको परिवेश र आजको चेतनाले मूल्यांकन गर्दा ती कारण गलत सावित भए । सामाजिक लक्ष्यका ध्येयले भन्दा सत्ताप्राप्तिका छिनाझपटीले पुष्पलाललाई हटाइएको देखिन्छ । उनलाई उग्रवामपन्थी र कम पढेलेखेको भन्ने आरोप थियो, जसलाई आफ्नो कामबाटै उनले गलत सावित गर्न सफल भएका थिए।
गणतन्त्रका योजनाकार पुष्पलाल
बाईस वर्षको अल्लारे उमेरमा नै उनले ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ उल्था गरे र त्यसमा बीसबाईस पृष्ठको भूमिका लेखे । त्यस भूमिकामार्फत मार्क्सवादलाई नेपाली सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशानिर्देश गरेका छन् । जतिखेर उनले कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरे, उनले घोषणापत्र निर्माणसमेत निर्माण गरे, त्यो घोषणापत्रमा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावी दिशा र कार्ययोजना पेस गरिएको छ । आजको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका हरकोहीमा उनका ती दुई कृतिको छाप छ । उनको उचाइको अर्को वैचारिक नेता देखिँदैनन् । पुष्पलालका ती कृति कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावभूमि तयार गर्न प्रभावकारी छन्।
पुष्पलालले गणतन्त्रको नारा अघि सारेकाले उनलाई उग्रवामपन्थीको आरोप लागेको हो । २००७ मा राजा त्रिभुवनले संविधानसभा घोषणा गरिसकेको पृष्ठभूमिमा र कम्युनिस्ट आदर्शका आधारमा उनले गणतन्त्रको माग गरेर पटक्कै गल्ती गरेका थिएनन् । तर तिनै कारण देखाएर उनलाई महासचिवबाट हटाइयो । त्यहींबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विचार र सामाजिक मुद्दाकेन्द्रित भन्दा पनि सत्ता हत्याउने खेलमा लाग्यो र आन्दोलनको लक्ष्य ‘डिरेल’ भयो।
२८ सालको झापा आन्दोलनले त्यस्तो विचलनलाई केही सच्याउने प्रयत्न गर्‍यो । खास गरेर २०४६ को परिवर्तनको सेरोफेरोमा मदन भण्डारीले नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको यथार्थमा ‘जबज’ भन्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिए । पछिल्ला कालखण्डमा भण्डारी र जबजको रट लगाउने तर त्यसको अन्तर्य नबुझ्नेको पार्टीमा हालीमुहाली बढ्दै गयो । पुष्पलाललाई ‘डिथ्रोन’ गर्ने शक्ति र प्रवृत्तिले नै अहिले पार्टीभित्र अपराधी र केवल पैसेलाई हुलेका हुन् ।
प्रणालीले मात्र हुन्न
यहाँसम्म आन्दोलन आइपुग्दा एक-दुई वटा निश्कर्ष हाम्रा अगाडि छन् । गएको ७०-८० वर्षको अवधि नेपालको सामाजिक यथार्थसँग मेल खाने राजनीतिक प्रणालीको खोजीमा हामी लाग्यौं र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि हामीले त्यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर परिभाषित गर्‍यौं । तर प्रणाली आफैंमा पर्याप्त हुँदो रहेनछ भन्ने पछिल्ला दश-आठ वर्षका अनुभवले संकेत गरेका छन् । प्रणालीसँग संगति राख्ने संरचना पनि चाहिँदो रहेछ । त्यो संरचना कस्तो बनाउने भन्ने मुलुकको सामाजिक यथार्थले निर्धारण गर्ने हो ।
दोस्रो पुस्तालाई सत्ता राजनीति हस्तान्तरण गरेर बिजुक्छेले आफूलाई ट्रेन्डसेटरका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।
वर्गीय धु्रवीकरण, उच्च र निम्न वर्ग, १२४-२५ वटा जातजाति, धर्मसंस्कृति र भौगोलिक विविधता हाम्रो यथार्थ हो । यी सबै शक्तिलाई वर्ग विभाजन गर्दा तपाईं कुन वर्गमा उभिने, तपाईंको सामाजिक यथार्थलाई त्यो संरचनालाई कसरी मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने, हिमाल, पहाड र तराईका शक्तिलाई कसरी त्यो संरचनामा सामेल गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । हामीकहाँ नपुगिराखेको विषय भनेको त्यही असन्तुलन हो । त्यसलाई सन्तुलनको दिशामा लैजाने प्रयत्न हुनुपर्छ अब।
त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण विषय आर्थिक संरचना हो । संविधानमा त्रिखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था छ । हाम्रो मुलुक अन्ततः पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा छ भन्ने आम सहमति हो । यदि त्यसो हो भने भावी दिशा के त ? अहिलेको भरे नै समाजादमा पुग्ने हो कि ? यसमा पर्याप्त गृहकार्य भएजस्तो लाग्दैन । हाम्रो आर्थिक र सामाजिक अवस्था हेर्दा यहाँ धेरै लामो समयसम्म पुँजीवाद नै हावी हुनेजस्तो देखिन्छ । तर १८÷१९ औं शताब्दीको जस्तो निर्बिघ्न पुँजीवादको रूपमा रहने सामाजिक-आर्थिक आधार छैन आज।
समाजवादी शक्तिको आफैंमा उपस्थिति, समाजवादी ध्येयका तर्कलाई मान्ने ठूलो जनमत छ । अहिले समाजवादको निम्ति उत्पादन शक्तिको अपेक्षित विकास भइसकेको छैन । त्यसो हुँदा त्यस विकासको दिशामा अहिलेको आन्दोलनले काम गर्नुपर्छ ।संविधानकै प्रावधानभित्र राज्यक्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गर्दागर्दै र प्ले गर्ने ठाउँ दिँदै गर्दा राज्यक्षेत्र र सहकारी दुवैलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
राज्यक्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषय पनि हो । राज्यले गर्न खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषय पनि हो । राज्यक्षेत्रको खर्च मुलुकको समानुपातिक विकासमा कसरी लगाउने भन्ने हो । नीतिगत तहमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी ढंगमा हाल्ने विषय हो । तर अहिलेको सहकारी सम्पत्तिवालाको सिन्डिकेट तयार गर्ने खालको छ । हामीले त सहकारीको माध्यमबाट तल्लो तहका मान्छेलाई संगठित गर्ने हो । यसर्थ, सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रभुत्व दिँदा मात्रै समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुनसक्छ । हामी अहिले पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले हाम्रा कार्यक्रम, शैली र संगठनलाई समाजवादमैत्री बनाउनु आवश्यक छ।
पुष्पलाललाई डिथ्रोन गर्नेबाटै ‘डन संस्कार’
पुष्पलाललाई डिथ्रोन गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति आज समाजबाट तिरस्कृत र आपराधिक व्यक्ति र शक्तिलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेको छ । यस प्रवृत्तिले वर्गमा आधारित संगठन बनाउनेभन्दा विस्तारै आफू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने वर्गभन्दा अन्य वर्गको जासुसीतिर लाग्यो । त्यसैले पनि अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन मध्यम वर्गको पार्टी भएको छ । निजी हितमा मरिहत्ते गर्नेहरूको ‘इर्दगिर्द’ पार्टीमाथि छ ।
अहिलेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २-३ सय रुपैयाँका भरमा २०४८ को आमनिर्वाचन चुनाव जितेर आएका हुन् । अहिले स्थानीय तहदेखि सांसदसम्मको चुनावमा एउटा कम्युनिस्ट उम्मेदवार उठ्न र जित्न करोडौं रुपैयाँ चाहिने ? यस्तो शक्ति र प्रवृत्तिलाई पार्टी नेतृत्वले बोकेर हिँडेको छ, त्यो गलत छ ।
निष्ठाका मानिसभन्दा पनि चुनाव जित्ने नाममा जस्तासुकै मान्छे र प्रवृत्तिलाई बोक्नुले अन्ततः एउटा बिन्दुमा ‘क्रिटिकल मास’ तयार भइसकेपछि त्यसले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । हामी त्यसतर्फ हिँडिरहेका छौं । खालि जित्ने नै मात्र लक्ष्य राख्दा ‘मोभमेन्ट’ को उद्देश्य प्राप्त हुँदैन, बरु आदर्शवान् व्यक्ति पार्टीबाट पलायन हुन्छन् । त्यसो हुँदा पार्टी र आन्दोलनलाई अपुरणीय क्षति हुन्छ ।
आगामी चुनावमा आफैं उम्मेदवार नबनेर दोस्रो पुस्ताको प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई सत्ताराजनीति हस्तान्तरण गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’ उदाहरण बनेका छन् । उनी ट्रेन्ड सेट गर्न सफल भएका छन् । यो कामको पहिलो श्रेय गणेशमान सिंहलाई दिनुपर्ने हो तर गणेशमानले ‘ट्रेन्ड सेटिङ’ को काम गर्न सक्नु भएन । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने काम लर्तरो थिएन, तर त्यो कामले अन्ततः उनैलाई घाटा पुर्‍यायो । उनको उद्देश्यलाई कमजोर बनाइयो र कांग्रेसमा पछि गलत प्रवृत्ति स्थापित भयो ।
प्रधानमन्त्री नभए पनि उनले राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारलाई बलियो बनाउनुपथ्र्यो, तर सकेनन् । रोहितले यो कदम परिस्थिति हेरेर चालेजस्तो देखिन्छ । हर पार्टीको तल्लो तहदेखि नै सत्ता-राजनीतिको प्रयोग गर्नेबारे बहस र द्वन्द्व छ । हरहालतमा सत्तामा बस्नेले सत्ता थाम्ने र सत्तामा नहुनेले त्यसलाई कसरी हत्याउने भन्ने प्रचलन र हारालुछीलाई सच्याएर पार्टीको लक्ष्यसँग निष्ठावान् व्यक्तिमा सत्ताराजनीति हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने विचार पनि आउँदै गर्दा यस कदमले त्यसतर्फ सहयोग नै गर्छ ।
नेमकिपाका केही विषय लोभलाग्दा छन् । अरू पार्टीमा नभएको संस्कृति र संस्कार उनको पार्टीमा छ । चाहे संसद्मा होस् या अन्यत्र उनको संस्था बोल्छ । उनी र उनका अभिव्यक्तिमा व्यक्तिगत ‘हिरोइजम्’ देखिँदैन । उनका कार्यकर्ता पनि पार्टीभित्र पार्टी छलफलको निश्कर्षलाई मात्र सार्वजनिक गर्छन् । अन्य कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि व्यक्ति बोल्छ, पार्टी बोल्दैन । तर उनको संगठनमा सामाजिक र सामूहिक विचार मात्रै प्रस्तुत हुन्छ । भक्तपुरमा मात्रै उनको बढी प्रभाव भए पनि त्यहाँको विकासमा उनले आफ्नो मोडल प्रस्तुत गरेका छन् ।
भक्तपुर गएर हर्दा त्यहाँको आर्थिक सामाजिक विकासमा बिजुक्छे दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ । बिजुक्छेको उपस्थिति र पकडबिना पञ्चायतकालीन भक्तपुरले आजको स्वरूप लिने थिएन । उनी पनि समाजवादी गणतन्त्र र जनताको प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन् । समाजवादी गणतन्त्र रणनीतिक कार्यक्रम हो, तात्कालिन कार्यक्रम होइन । त्यो रणनीतिक लक्ष्यसँग तात्कालिक कार्यक्रम कसरी जोड्ने भन्नेबारे छलफल हुनै बाँकी छ।
मालाको भारी बोक्नेलाई माक्र्सको सन्देशविकृतिको जडको कुरा गर्दा स्वयं मार्क्सवादी स्रष्टा के सोच्थे भन्ने पनि जानौं । घाँटी नै भाँचिने गरी माला लगाउने, प्रशस्ति र महिमा गान गाइदिउन् भन्ने अपेक्षा र चर्तिकला देखिन्छ अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरूमा । कार्ल माक्र्सले डब्लूएस ब्लसलाई एउटा चिठी लेखे, ‘म र एंगेल्सलाई वैयक्तिक प्रतिष्ठाको निम्ति परालको त्यान्द्रोजति पनि प्रवाह छैन ।
यसलाई झुटो ठान्नुहुन्छ भने म दुइटा उदाहरण दिन्छु । हामीले कम्युनिस्ट लिगमा सामेल हुनुअघि एउटा सर्त राख्यौं, लिगका मान्छेसँग तिम्रो विधानमा रहेको व्यक्ति पूजाको प्रावधान हटाउँछौ भने मात्र हामी लिगमा सामेल हुन्छौं । अर्को, जतिखेर हामी सामेल भयौं, हाम्रो बारेमा प्रशंसाको पुल बाँधियो, त्यसलाई तत्कालै निरुत्साहित र प्रतिवाद गर्‍यौं । हामीले त त्यसो गर्‍यौं, कम्युनिस्ट लिगका वरिष्ठ नेता लासाल भने उल्टो बाटो हिँडे । उनी प्रशंसा र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका भोगी थिए ।’ एंगेल्सले कार्ल ग्रुन भन्ने अर्को पात्रका कुरा गरेका छन् । ती कम्युनिस्ट लिगभित्रका षड्यन्त्रका प्रणेता थिए । तिनै कार्ल ग्रुन र लासालका चेला छन् हाम्रोमा । तिनकै कारण कम्युनिस्ट पार्टी यति भुत्ते र आदर्शविमुख देखिएको हो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले चार कार्यभार प्रमुख छन् ।क. संरचनात्मक पुनर्संरचना । मार्क्सवादले परिलक्षित गरेको वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर मिश्रत समाजका राउटे र दुसाधसम्मका सबै शक्तिलाई समेटेर त्यसो गर्नु आवश्यक छ । त्यसो हुँदा उनीहरू झोला बोक्नेमात्रै होइन, पार्टीको कार्यकारीसम्म हुन सकुन् ।
ख. आर्थिक विकासको दिशा । संविधानले नै समाजवादोन्मुख त्रिखम्बे अर्थनीति भनिसकेपछि निजी क्षेत्रलाई ‘प्ले’ गर्न उपयुक्त मैदान बनाउँदा-बनाउँदै राज्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी र सफा बनाई जनस्तरलाई त्यसमा सहभागी बनाउने, सहरीमात्रै होइन ग्रामीण योजना बनाएर सिमान्त विकास पुर्‍याउने ।
ग. प्रष्ट विदेश नीति । कसैको प्रभावक्षेत्रमा नरही आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा सीधा उभिने विदेश नीति अबको विदशे नीति हुनुपर्छ नेपालको ।
घ. सांस्कृतिक जागरण । अघिल्ला तीनवटा कामलाई सहयोग गर्नेगरी सांस्कृतिक पुनर्जागरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्ति होइन, विचार, आदर्श र लक्ष्यलाई प्रमुख बनाउँदै त्यो आधारमा पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्छ । सांस्कृतिक सामन्तवादबाट पिण्ड छुटाउन सकेमात्र आदर्श समाज बन्न सक्छ ।
काठमाडौं- ५ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा 6669
प्रदेशमा तत्काल पाँच हजार कर्मचारी 13472
पहिलो चरण चुनाव : आज अन्तिम प्रचार 2380
कांग्रेसले गठबन्धन अझै कस्ने 9270
तीन वरिष्ठ सह-सचिव सचिवमा बढुवा 7553
कम्युनिस्टहरूको प्रणाली परिवर्तन 1006
चुनावदेखि सावधान 933
चीनसँगको एउटा मात्र नाका चार दिन बन्द 1280
गोरखामा एक बोरा सुतली बम भेटियो (अपडेट) 9106
सडकमा भेटिएको बम सेनाले डिस्पोज गर्‍यो 907
निर्वाचन विरोधी एक शिक्षक पक्राउ 1085
निर्वाचन कार्यालयमै शक्तिशाली बम 2743
चरिकोटमा भेटिएको बम सेनाद्वारा निष्क्रिय 1270
एनालग टीभी बन्द : ३० लाख ग्राहक प्रभावित 32687
इन्टरनेट ब्यान्डविथमा मासिक २० करोड खर्च 3431